Ogaden News Agency (ONA) – Dilal ka dhacay Dhulka Ogaden
Dilal ka dhacay Dhulka Ogaden
Waxaa aad u batay dadka Shacabka ah ee lagu laynayo dhulka Somalida Ogaden. Dialalkan oo u dhaca qaabab aad u fool xun waxaa kamida in qofka Gaadhi lamariyo, in jidh dil qofku u dhinto, in toogasho lagu dilo, in rasaas lagu furay shacabka dadka qaarkood u dhintaan iyo Gaajo loo dilo qofka intaba, waa noocyo kamida dialalka ka dhaca dhulka Somalida Ogaden. Bishan dhamaatay ee July 2015 waxaa Ciidamada Gumeysiga Ethiopia ku laayeen shacab aad u badan deegamo kamida dhulka Ogaden.
Allaah ha u naxariistee Axmed Cali Nuur waxaa ciidamada Gumeysiga Ethiopia gaadhi ku mariyeen magaalada Dhagaxbuur halkaas oo uu ku nafbaxay taariikhdu markay aheyd 28/07/2015.
Gurdumi oo kamida Degmada Awaare waxay ciidamada Gumeysigu ku dillee Allaah ha u naxariiste Khadiijo Warsame taariikhdu markay aheyd 25 July 2015.
Dadka kale ee dhibaatada ba’an lasoo gaadhsiiyay waxaa kamida Hinda Cabdullaahi Gaab oo Ciidamada Woyanuhu Xoog damceen inay ku kufsadaan, Gabadhaas waxaa soo gaadhay jidh dil aad u daran. Dhacdadan foosha xun ayaa ka dhacday Huusaale oo kamida degmada Fiiq taariikdu markay aheyd 26 July 2015.
Laba dumara oo is dhalay waa Hooyo Shugri Muxumed iyo Gabadh ay dhashaye ayaa iyana ciidamada gumeysigu kuqafaasheen haardhagax oo ka tirsan Degmada Fiiq taariikhdu markay aheyd 20 July 2015. Wali lama oga meel ay ciidamada gumeysigu u kaxaysteen iyada oo lagu heyn nolol iyo geeri toona.
Dhacdooyinka foosha xun ee dilka, kufsiga, jidh dilka iyo tacadiyada badan leh ee ka dhaca dhulka Ogaden ayaa wax badan caalamku ka sheegin iyada oo Taliska Woyanaha Ethiopia maalinba maalinka ka danbeysa uu sii badiyo tacadiyada uu kula kaco shacabka aan is difaaci karin ee maatida Somalida Ogaden.